ကမ္ဘာတစ်လွှားက ထူးထူးခြားခြား လူသားစားမှု ဆယ်ခုအကြောင်း | Buzzy
ကမ္ဘာတစ်လွှားက ထူးထူးခြားခြား လူသားစားမှု ဆယ်ခုအကြောင်း
သင့်အနားမှာရော... ရှိနေမလား ?
1. Mother Eats Newborn Baby
အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ် Li Zhgenghua ဟာ သူမရဲ. မွေးခါစ ကလေးငယ်ရဲ. လက်ကို ကိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကို သူနာပြုဆရာမက အခန်းထဲဝင်လာရင်း ကလေးငယ်ရဲ. လက်ကောက်ဝတ်ကို ကိုက်နေတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ် ။ ဆေးရုံဝန်ထမ်းတွေဟာ သူမရဲ.ပါးစပ်ထဲက ကလေးငယ်ကို ကယ်တင်ခဲ့ရပါတယ် ၊ ဒါပေမယ့် ကလေးငယ်ကတော့ သွေးသံရဲရဲနဲ့ပေါ့ ။
Matthew Williams ကို နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၄ တုန်းက ဟိုတယ်အခန်းတစ်ခုမှာ လူသတ်သမားအဖြစ် သံသယနဲ့ ဖမ်းဆီးခဲ့ရပါတယ် ။ သူ့ကို အသက်၂၂ အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ. မျက်နှာကို ဝါးနေတုန်း တွေ့ခဲ့ရတာပါ ။ လုံခြုံရေးတွေက ရဲတွေကို ခေါ်ပြီး သူ့ကို ဖမ်းဆီးခဲ့ရပါတယ်။
Albert Fish ဟာ နောက်ပိုင်းမှာတော့ “The Brooklyn Vampire,” “The Boogey Man,” နဲ့ “The Gray Man.” ရယ်လို့ လူသိများခဲ့ပါတယ် ။ သူဟာ မိဘမဲ့ဂေဟာမှာ ကြီးပြင်းခဲ့ပြီး ၊ ကျင်ငယ်ရည်ကို သောက်ကာ ကလေးငယ်တွေကို စားပစ်လေ့ ရှိပါတယ် ၊ သူရဲ. နောက်ပိုင်းအချိန်တွေမှာ သူဟာ ငယ်ရွယ်တဲ့ ယောင်္ကျားလေးတွေကို သတ်ပစ်လေ့ ရှိပြီး ၊ များသောအားဖြင့် ကလေးတွေဟာ အသက်ခြောက်နှစ်အောက်ပဲ ရှိပါတယ်။
Vince Weiguang Li ဟာ ကနေဒါနိုင်ငံ Manitoba ဘက်စ်ကားပေါ်မှာ ကျူးလွန်ခဲ့တာပါ ၊ သူဟာ တရုတ်ပြည်ကနေ ကနေဒါကို ရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ် ။ သူဟာ ကားပေါ်မှာ အိပ်ပျော်နေတဲ့ Tim McLean အမည်ရှိ ခရီးသည်ကို ဓါးနဲ့တိုက်ခိုက်ပြီး ကားပေါ်မှာတင် အဲ့အမျိုးသားရဲ. အသားကို စားခဲ့ပါတယ်။
Issei Sagawa ဟာ ဒတ်ခ်ျလူမျိုးတစ်ဦး ကျောင်းသူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Renee Hartevelt ကို သတ်ပြီး စားခဲ့တာကြောင့် ဂျပန်နိုင်ငံမှာ လူသိများပါတယ် ။ သူဟာ ဒီမိန်းကလေးငယ်ကို သူ့ရဲ.အိမ်ကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး သူမကို သတ်ပစ်ခဲ့ကာ သူမရဲ. ခန္တာကိုယ်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံပြီး ၊ သူမရဲ. အသားကို စားခြင်းကို နှစ်ရက်တိုင်အောင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
Alexander Spesivtsev ဟာ လက်၇ှိမှာတော့ စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံမှာ ကုသမှု ခံယူနေရပြီး သူဟာ ထိန်းသိမ်းမခံခဲ့ရစဉ်က လူပေါင်း ၈၀ လောက်ကို သတ်ခဲ့ပြီး ဒါကို သူ့အမေနဲ့ တွဲဖက်ပြီး လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာပါ ။ သူတို့နှစ်ဦးဟာ သူတို့သတ်ခဲ့သူတွေကို စားခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
ရက်ပါ Big Lurch ဟာ ညတစ်ညမှာ PCP သောက်ပြီး သူဟာ ခဏတာ ရူးသွပ်သွားကာ နောက် ၂၄ နာရီ အကြာမှာ သူဟာ သူ့အခန်းဖော်ကို သတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ် ။ Tynisha Ysais အမည်ရှိ သူမရဲ. ခန္တာကိုယ် အစိတ်အပိုင်း အချို.ဟာ ကိုက်ဖဲ့စားသောက်ခြင်း ခံထားရပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာ Rudy Eugene ဟာ လူသားစားမှုတွေထဲမှာ လူသိများခဲ့ဆုံး လူတွေထဲက တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ။ သူဟာ အိမ်ခြေယာမဲ့ တစ်ဦးကို တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။
Yoo Young-chul ဟာ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံက ဖြစ်ပြီး သူရဲ. ကိုယ်ပိုင်ဥပဒေ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ လူတွေကို သတ်ဖြတ် စားသောက်ခဲ့ပါတယ် ။ သူဟာ လူပေါင်း ၂၁ ယောက်ကို တစ်နှစ်အတွင်း သတ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ။ ဒီထဲက သုံးယောက်ကိုတော့ မီးရှို့ခဲ့ပြီး ကျန်တာတွေကိုတော့ ကိုယ်အဂါင်္ဖြတ်တောက်ပြီး သတ်ခဲ့တာပါ ။ သူဟာ လူသေတွေရဲ. အသည်းကို အစိမ်းအတိုင်း စားခဲ့ပါတယ်။
Matej Curko ဟာ ကလေးနဲ့ မိန်းမရှိပေမယ့် ဆိုးတဲ့ လူတစ်ဦးပါ ။ သူဟာ စိတ္တဇဖြစ်ပြီး လူတွေကို သတ်ဖြတ်ကား အချို.ကို ရေခဲသေတ္တာထဲ သိမ်းဆည်းထားခဲ့ပါတယ် ။